Qaraxii ka dhacay Zoobe oo weli khasaarihiisa sii kordhayo. – Bosaso Times News
Qaraxii ka dhacay Zoobe oo weli khasaarihiisa sii kordhayo.
admin October 16, 2017 Qaraxii ka dhacay Zoobe oo weli khasaarihiisa sii kordhayo.2017-10-16T17:52:16+00:00 Puntland, somali News No Comment
Qaraxii aadka u weynaa ee ka dhacay isgosyka Soobe ee magaalada Muqdisho ayaa weli waxaa sii kordhaya meydadka iyo tirada ku waxyeeloobay. Inta hada la hubo ilaa 300 in ka badan ayaa dhimatay dhaawacana intaas waa ka sii badan yahay.
Waxaa socda gurmad balaaran oo wadamada Soomaaliya saaxiibka la ah iyo dawladda Federaalka Soomaaliya ay wadaan kaas oo lagu daad gureynayo dadka aadka u liita dalkana aan wax looga qaban karin in dibadda loo qaado. Waxaa maanta magaalada Muqdisho timi diyaarad ka socota dalka Turkiga oo qaaday ilaa 40 qof oo dhaawacyo culus ah kuwaas oo ay la socdeen ilaa 40 qof oo ehelkooda ah.
Wadanka Turkiga oo si weyn u caawiya dadka iyo dawladda Soomaaliya ayaa muujiyey dadaal xoogleh oo walaaltinimo asagoo soo diray dhakhaatiir hor leh, qalab caafimaad iyo diyaarado qaada dadka dhaawaca culus ah.
Waxaa kaloo iyagana gurmad soo diray caafimaad dawladda Jabuuti, Qatar waxaana la sugayaa in wadamo dheeraad ah ay iyaguna gurmad kaas la mid ah soo fidiyaan.
Waxaa meesha ku jirta in dadka Soomaaliyeed oo aad uga dhiidhiyey qaraxii foosha xumaa ay iyaguna wadaan dadaalo lagu caawinayo dadka ku waxyeelooban dhibaatada qaraxii maalintii Sabtida xiligii casarka ka dhacay goobtaas.
Madaxweynaha dalka Mudane Farmaajo iyo Raisalwasare Kheyre ayaa amray dhamaan awooda dawladda in lagu jaheeyo taakuleynta dadka wax yeeloobay iyo waacintooda.
http://www.bosasotimes.com/qaraxii-ka-dhacay-zoobe-oo-weli-khasaarihiisa-sii-kordhayo/http://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2017/10/zoobe3.jpghttp://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2017/10/zoobe3-150x150.jpg 2017-10-16T17:52:16+00:00 adminPuntlandsomali NewsFarmaajo,Gurmad,Kheyre,Muqdishu,Qaraxa Zoobe,TurkeyQaraxii aadka u weynaa ee ka dhacay isgosyka Soobe ee magaalada Muqdisho ayaa weli waxaa sii kordhaya meydadka iyo tirada ku waxyeeloobay. Inta hada la hubo ilaa 300 in ka badan ayaa dhimatay dhaawacana intaas waa ka sii badan yahay. Waxaa socda gurmad balaaran oo wadamada Soomaaliya saaxiibka la ah...admin siyaadyusuf@hotmail.comAdministratorBosaso Times News
Farmaajo, Gurmad, Kheyre, Muqdishu, Qaraxa Zoobe, Turkey
« Akhriso war murtiyeedka ka soo baxay shirkii Kismaayo
Madaxweyne Farmaajo oo dalka dib uga soo laabtay, kana warbixiyay safarkii dalalka deriska »